SaaS Makambani Excel kuCustomer Kubudirira. Iwe Unogonawo ... Uye Heino Sei | Martech Zone
Software haisi yekutenga chete; ihwo hukama. Sezvo painoshanduka uye inogadzirisirwa kusangana nezvinodiwa zvetekinoroji, hukama hwacho hunokura pakati pevanopa software nemushandisi- mutengi - sekuenderera kwekutenga kusingaperi kuri kuenderera. Software-se-se-sevhisi (SaaS) vanopa vanowanzo shanda mukushandira vatengi kuitira kuti vararame nekuti vari kuita yekutenga isingagumi munzira dzakawanda kupfuura imwe.
Basa rakanaka revatengi rinobatsira kuona kugutsikana kwevatengi, rinokurudzira kukura kuburikidza nevezvenhau venhau uye kutaurwa-kwemuromo, uye rinopa vashandisi chivimbo chekuwedzera hukama hwavo kuburikidza nehumwe basa uye kugona. Kune SaaS vanopa vanobatanidzwa muchikamu cheB2B, izvi zvinogona kureva huwandu hwakawanda hwezvigaro zvakawedzerwa uye marezinesi, zvese kubva kune mumwe mutengi.
Mune yanhasi kukwikwidza sehupfumi hupfumi, yakasarudzika vatengi rutsigiro inogona kuve inonyanya kukosha musiyano wezvese. Uine izvo mupfungwa, heano mashoma matipi akakosha kubva kuSawaS munda:
1. Usarega izvo zvakanaka (mari yekuchengetedza) ive muvengi weakakwana (kugutsikana kwevatengi).
Kuchengeta mitengo pasi zvirokwazvo chinangwa chakakodzera. Kutorwa kune zvakanyanyisa, zvisinei, zvinogona kutungamira kune mamwe akaipa bhizinesi sarudzo.
Mazhinji mashandiro evatengi akaedza kudzora mutengo nekunyadzisa rutsigiro rwavo rwevatengi, zvichidonhedza zviitiko zvevatengi semhedzisiro. Vamwe vakagadza sarudzo dzekuzvishandira, dzinogona kunge dziri tsananguro yekuti "verenga chinyorwa ichi wozvionera wega," asi SaaS vanopa inyanzvi pakunzwisisa saizi imwe haikwane zvese. Tech-savvy millennials uye Gen Zers anogona kunge akaenzana nesarudzo yepamhepo yekuzvishandira, asi Gen X nevatengi vevacheche vatengi vanosarudza kushandisa foni vanoona kuzvishandira senzira iri nyore yekubvisa kusangana kwevanhu chaiko.
Tsigira masangano anoedza kuyera zvekare chinetso chebasa-rekudzikisira nekudzikamisa nguva yekuonana nayo inoshaya poindi. Nekukurudzira vamiririri kudzikisira nguva inoshandiswa pane yega kufona, kutaura, meseji, kana email, zviri nyore kusanzwisisa kana kufuratira zvinodiwa nevatengi. Zviitiko zvakashata zvinowanzoitika.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kukosha kwemhando yekusangana neyakareba-nguva vatengi kuvimbika, kunyanya mukati mekusingaperi kwekutenga kutenderera. Kusvikira makambani aona mutengo wemubhadharo, kurasikirwa kwekuvimba, uye kukuvara kwemazita ezve brand, nguva pfupi-pfupi yekuchengetedza mari inoenderera ichikunda mukubudirira kwenguva refu.
2. Sarudza izvi zviviri metric pachinzvimbo.
Yakanakisa basa revatengi uye masangano ekutsigira anotarisa pane mashoma metric: kunyanya:
Avhareji yekumhanyisa kumhinduro - metric (chimwe chinhu senge yepakati kumhanyisa kupindura, kana Asa), iyo inogona kuyerwa nechero yazvino puratifomu yekutsigira; uye imwe yakanangana nekugutsikana kwevatengi, nemetriki akaunganidzwa kuburikidza nekukurumidza post-yekubata ongororo. Nguva dzekupindura idharimendi yekureruka, kuwanikwa uye kugutsikana, saka mhinduro dzinofanirwa kukurumidza sezvazvinogona.
Kwevatengi kugutsikana zvikoro - pamwe nerekutaura kwemahara, ratidza kana zvido zvevatengi zvehutano hwese hwebasa (QoS) zvakasangana. Panzvimbo yekutonga kushanda uchishandisa metric senge kutanga-kubata resolution uye kufona kwenguva-iyo inogona kushandiswa nyore nyore uye pakupedzisira isingatarisi QoS-SaaS vanopa vanowana kubudirira mukuyera ASA uye nekugutsikana kwese.
3. Funga mutengi sekunge ndiamai vako vari parunhare.
Tsitsi chikamu chakakura chekutsigirwa kwevatengi. Fungidzira ndiamai vako kana nhengo yemhuri yepedyo parunhare; iwe ungangoda kuti nzvimbo yekutsigira ipindure nekukasira (kana kumupa sarudzo yekugamuchira foni zvakare). Iwe zvakare unodawo mumiriri kuti afambe naye kuburikidza nhanho imwe neimwe yemhinduro nekushivirira uye tsitsi, kunyangwe kana izvo zvaireva kutaura naye kuburikidza neyekuzvishandira-sevhisi link. Chekupedzisira, iwe waizoda mumiriri kuti amupe iye nguva yese yaanoda, kunyangwe kana izvo zvichitorera kufona yakapfuura nguva yekumanikidza yenguva.
Bvunza maneja webasa revatengi pane chero SaaS kambani uye ivo vanozobvuma kuti kudzidziswa mune hunyanzvi hwe software kune vashandi vevatsigiri vevatengi haisi yekungoita-kuva-nayo; asi, zvakakosha. Kunyangwe kana kudzidziswa kwemumiririri kwekambani kuri kwakanaka uye ASA zvibodzwa zviri pamusoro pevhareji, kurapa mutengi wese senhengo yemhuri kuchaita kuti vashandisi vanyorwe pamusoro pechiratidzo chako pamusoro pezvimwe zvinhu zvese.
4. Kurudzira vamiririri vako kune mamwe madhipatimendi
Kukwezva kwemukati kunofanirwa kuve kunoratidza zvakanyanya metric yekubudirira kwevatengi kubudirira. Kana kambani ikasimudzira vashandi vayo vanoita basa revatengi kune mamwe mativi esangano, zvinoreva kuti haisi yekungodzidziswa chete asiwo kupa avo vashandi nzira yebasa.
Smart madhipatimendi evashandi vevatengi havatye kurega avo vamiririri vachienderera mberi kutengesa, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, chigadzirwa chigadzirwa, kana zvimwe zvinangwa. Zvinoreva kuti vamiririri vakadzidza mhando pamwe nemasimba ayo nemikana yekukura kubva pamberi pekuratidzwa kwavo kumberi. Sevadzidzi vekambani "yepurazi system," vane ruzivo rwakakosha uye tsika dzinozokosheswa mubhizinesi rese.
Kufungisisa izvo zvakakosha kutyaira (mutengi) kubudirira
Vemabhizimusi vanofarira kuti, "Chii chinoyerwa chinogadziriswa." Mukushandira vatengi, zvisinei, izvo zvinoyerwa zvinowanzowanikwa manipulated. SaaS vanopa vakanaka pakudzivirira misungo yekuyera nekuti vanoona maitiro acho achifambisa sevhisi kure nevatengi pane kuenda kwavari.
Inyika iri kuwedzera kuburitswa kunze uko, uye vatengi vanokoshesa zvakaitika pane zvimwe zvinhu zvese. Iyo kambani inobata zvakanaka sei vatengi vayo ingangoita yakakosha sechigadzirwa chairi kutengesa. Software vanopa vanogona kunge vari kutengesa yekutanga S in SaaS, asi kuti vabudirire ivo vanofanirwa kuve masters pane yechipiri S. Icho chirevo chero kambani-uye chero mutengi - anozofarira.
Tags: asaavhareji kumhanya kupinduraavhareji kumhanyisa kupindurab2bmuchiso mukurumbirakuvimbika kwemutengikuchengetwa kwevatengiMabatiro evatengivatengimutengi kubudirirakutanga-kubata resolution-refu mutengimhando yebasasaassevhisiSoftwaresoftware sebasa